အစားအသောက်မူမမှန်တဲ့ရောဂါကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေအလုပ်မလုပ်တော့တဲ့ ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတစ်ဦး | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
အစားအသောက်မူမမှန်တဲ့ရောဂါကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေအလုပ်မလုပ်တော့တဲ့ ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတစ်ဦး
အစားအသောက်မူမမှန်တဲ့ရောဂါတစ်မျိုးရနေတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေ ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်တော့တာကြောင့် အသက်ဆက်နိုင်ဖို့အတွက် အထူးကုဆေးရုံတစ်ခုကို တင်လိုက်ရပါတယ်။
Stockport မှာနေထိုင်တဲ့ 25 နှစ်အရွယ် Adele Clay ဆိုသူဟာ ကိုယ်တွင်းအပူချိန်ကျဆင်းပြီး နှလုံးခုန်နှုန်းအလွန်နှေးကွေးလာတာကြောင့် ဆေးရုံသို့ခေါ်ဆောင်လာရပါတယ်။ သူမဟာ အစားအသောက်မူမမှန်တဲ့ရောဂါကို 12 နှစ်အရွယ်ထဲက ခံစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေကုန်အစားအသောက်တွေကို အလွန်အကျွံစားသောက်ပြီးတဲ့အခါ လက်ထိုးပြီး အတင်းပြန်အန်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
သူမ၏မိခင်ဖြစ်သူ Yvonne ၏ပြောကြားချက်အရ သူမရဲ့အခြေအနေဟာ အလွန်ဆိုးရွားတာကြောင့် ဆေးရုံတော်တော်များများဟာ လက်မခံခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူမရဲ့သမီးကိုကယ်တင်လိုတဲ့ပြင်းပြတဲ့စိတ်ကြောင့် နောက်ဆုံးမှာ Miss Clay ဟာ လန်ဒန်မှအကူအညီတစ်ခုကိုရခဲ့ပါတယ်။
“ကျွန်မတို့သူ့ကိုမဆုံးရှုံးချင်ဘူး။ ကံကြမ္မာကိုပဲ ပုံအပ်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်မျှော်လင့်ချက် ရေးရေးလေးပဲရှိမှန်းလည်းသိပါတယ်။ အပေါ်ထပ်ကပစ္စည်းတစ်ခုခုကျတဲ့အသံကြားတိုင်း Rick က ချက်ချင်းခေါင်းထောင်လာပြီး သူ့သမီးလဲကျတာလားလို့ အမြဲသွားကြည့်တတ်ပါတယ်။ သူမကိုအချိန်တိုင်းစောင့်ကြည့်ပြီးနေရတာကိုက ကျွန်မတို့ကိုသတ်နေသလိုပါပဲ” လို့ သူမရဲ့မိခင်က ပြောပါတယ်။
သူမရဲ့ အစားအသောက်မူမမှန်တဲ့ရောဂါဟာ ကျောင်းသူအရွယ်ထဲက စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံလုံးဝမစားမသောက်ဘဲနေသလို တစ်ခါတစ်လေကျတော့လည်း အများကြီးစားနေတတ်ပါတယ်။
Miss Clay ကတော့ သူမရဲ့ရောဂါဟာ မွေးရာပါလို့ယူဆထားပါတယ်။ ထို့နောက်မှာတော့ သူမကိုကူညီနိုင်မယ့်လို့ထင်ရတဲ့ လန်ဒန်ရှိအခြားစင်တာတစ်ခုကိုပို့လိုက်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ကံဆိုးစွာနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်အတွင်းမှာ အကြိမ်ပေါင်းများစွာပြန်ပြန်ဖြစ်ပြီး အခုလို အရမ်းဆိုးဝါးတဲ့ အခြေအနေကို ရောက်ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရောဂါဟာ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာ အတိအကျ မပြောနိုင်ပေမယ့် ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေများသူတွေကတော့-
1. စိတ်ဖိစီးမှုများသူများ၊ စိတ်ကျရောဂါရှိသူများ
2. အနာဂတ်ကို တွေးပူသူများ
3. တစ်ခုခုလုပ်တိုင်း မှားမှာကြောက်သူများ
4. အလွန်အကျွံ ရည်မှန်းချက်ထားသူများ
5. မိမိကိုယ်ကို စိတ်ထွက်ပေါက်မပေးသူများ
7. ၀မှာကို အလွန်အမင်း ကြောက်သူများ
8. အပျိုဖော်၀င်စ ဟော်မုန်း မတည်ငြိမ်ချိန်နှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတစ်ခုခု တိုက်ဆိုင်စွာကြုံသူများ
9. မိမိခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကို ကျောင်းတွင် စနောက်ခံရသော အပျိုဖော်/ လူပျိုဖော်၀င်စ ဆယ်ကျော်သက်လေးများ
10. မိသားစု ပြဿနာ၊ ရည်းစား ပြဿနာရှိသူများ
11. စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ / ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အနိုင်ကျင့်စော်ကားခံရသူများ
12. အစာစားချင်စိတ်ကို ထိန်းချုပ်ပေးသော ဦးနှောက်၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများ မွေးရာပါယိုယွင်းနေသူများ တို့ ဖြစ်ပါတယ်။